YOU NA-EKW WITHGH THE THEKP OFR OF OFLỌ NCHE? Kpọtụrụ LAW & MORE!
Ọ bụ ihe nkịtị na otu onye ma ọ bụ abụọ anaghị ekwenye mkpebi na ikpe ha. Kwenyeghi na ikpe ụlọ ikpe a? Mgbe ahụ enwere nhọrọ iji kpọgharịa ikpe a n'ụlọ ikpe mkpegharị. Agbanyeghị, nhọrọ a anaghị emetụta n'okwu obodo nwere ọmụrụ nwa na-erughị EUR 1,750. Instead kwenyere na mkpebi ụlọ ikpe ahụ? Mgbe ahụ ị ka nwere ike itinye aka na usoro ikpe n'ụlọ ikpe. Ka emechara, gị counterparty nwere ike n’ezie kpebie ịrịọ arịrịọ. A na-achịkwa ohere ime mkpesa na Aha 7 nke Usoro Iwu Obodo Dutch. O nwere ike ịdabere n'ụkpụrụ ikpe ikpe a na nke abụọ: na nke mbụ na-abụkarị n'ụlọ ikpe ma mesịa n'ụlọ ikpe mkpegharị. Ekwenyere na iji okwu a mee ihe ugboro abụọ na - eme ka ikpe ziri ezi ka mma, yana obi ike ụmụ amaala na ọchịchị ikpe ziri ezi. Mkpesa ahụ nwere ọrụ abụọ dị mkpa: • Ọrụ njikwa. Na mkpegharị, rịọ ụlọ ikpe ka ha leba anya n'okwu gị kpamkpam. Ya mere, ụlọ ikpe ahụ na-enyocha ma onye ọka ikpe na nke izizi guzobere eziokwu ahụ n'ụzọ ziri ezi, tinye n'ọrụ iwu ahụ n'ụzọ ziri ezi yana ma o kpeela ikpe. Ọ bụrụ na ọ bụghị, a ga-agbanwe ikpe nke onye ọka ikpe izizi site n'ụlọ ikpe. O nwere ike ịbụ na ị họọrọ usoro iwu na-ezighi ezi na mbido mbụ, ị mepụtaghị nkwupụta gị zuru oke ma ọ bụ nye obere ihe akaebe maka nkwupụta gị. Thereforekpụrụ nke resit zuru oke na-emetụta n'ụlọ ikpe mkpegharị. Ọ bụghị naanị na enwere ike igosipụta ụlọ ikpe niile ụlọ ikpe ọzọ maka nyocha, mana gị dịka onye na-arịọ arịrịọ ga-enwe ohere idozi mmejọ ị meburu na mbụ. Enwekwara ike ikwenye ime ka ikwuputa ihe ikwuputa.
Okwu ịrịọ arịrịọ Ọ bụrụ na ịhọrọ usoro ikpe mkpegharị n'ụlọ ikpe, ị ga-etinye akwụkwọ mkpesa n'ime oge ụfọdụ. Ogologo oge ahụ dabere na ụdị ikpe ahụ. Ọ bụrụ na ikpe ahụ metụtara ikpe nke ụlọ ikpe obodo, ị nwere ọnwa atọ site na ụbọchị ikpe ahụ iji tinye akwụkwọ mkpesa. You nwere ihe gbasara usoro nchịkọta n'oge mbụ? N'okwu ahụ, oge nke naanị izu anọ ga-emetụta maka ịrịọ arịrịọ n'ụlọ ikpe. Courtlọ ikpe ndị omempụ tụlere ma kpee ikpe gị? Thatdị ihe a mee, ị ga-eme naanị izu abụọ mgbe mkpebi ahụ maka ịgba akwụkwọ n’ụlọ ikpe. Ebe ọ bụ na usoro mkpesa ahụ kwenyesiri ike na iwu kwadoro, a ga-agbasochi usoro iwu ndị a. Okwu mkpesa ahụ bụ oge ngwụcha siri ike. Agaghị eme mkpesa n'oge a? Mgbe ị na-abịaghị n'oge ma ya mere na-adịghị anabata. Ọ bụ naanị n'okwu ndị ọzọ ka enwere ike itinye akwụkwọ mkpesa mgbe ngwụcha oge ngwụcha maka mkpegharị. Nke a nwere ike ịbụ ikpe, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọ bụ ihe kpatara ikpe ngwụsị oge bụ ikpe nke ọka ikpe n'onwe ya, n'ihi na ọ zigara ndị ọzọ iwu ahụ oge.
Usoro A na-ekwu maka mkpesa, ụkpụrụ dị mkpa bụ na ndokwa gbasara nke mbụ metụtara usoro mkpegharị. Ya mere, amalitere ịrịọ mkpegharị na otu ụdị yana otu ihe achọrọ dị ka nke emere na mbụ. Agbanyeghị, ọ dịbeghị mkpa ikwu ihe mgbakwasị maka ịrịọ arịrịọ. A ghaghị igosi ihe ndị a na nkwupụta nke mkpesa nke ejiri soro akwụkwọ ịkpọ oku. Ebumnuche maka ịrịọ arịrịọ bụ ihe mgbakwasị ụkwụ niile na onye na-arịọ arịrịọ ga-aga n'ihu na-arụ ụka na mkpebi ikpe nke ụlọ ikpe na nke mbụ kwesịrị ịhapụ. Akụkụ ikpe ndị ahụ nke enweghị ihe mgbakwasị ụkwụ na-aga n'ihu, ga-adịgide ma a gakwaghị atụle ha na mkpesa. N'ụzọ dị otú a, arụmụka banyere ịrịọ arịrịọ ma si otú a na-enwe ọgụ iwu. Ya mere odi nkpa iweputa ugwo ikpe ziri ezi na nkpebi nke emere na mbu. Ọ dị mkpa ịmata na ọnọdụ a na-akpọ ala nkịtị, nke na-ezube ime ka esemokwu ahụ ruo oke mkpebi, enweghị ike ọ gaghị aga nke ọma. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ: ihe ịrịọ arịrịọ ga-enwerịrị nnabata doro anya ka o doo ndị ọzọ anya n'ihe gbasara ịgbachitere ihe mmegide ahụ bụ kpọmkwem. Nkwupụta nke mkpesa na-agbaso nkwupụta nke agbachitere. N'akụkụ ya, onye a na-azara ọnụ na ịrịọ arịrịọ nwekwara ike wepụta ihe mgbakwasị ụkwụ megide mkpebi ikpe na-asọ mpi ma zaghachi na nkwupụta nke onye mkpesa ahụ banyere mkpesa. Nkwupụta nke mkpesa na nkwupụta nke ịgbachitere na-akwụsịkarị mgbanwe nke ọnọdụ na mkpesa. Mgbe agbanwere akwụkwọ edere ede, ọ bụkwaghị n'ụkpụrụ izipu ntọala ọhụrụ, ọbụnadị iji mee ka azịza ahụ dịkwuo elu. Ekpebiri ya na onye ọka ikpe enweghị ike ị attentiona ntị na ihe mgbakwasị ụkwụ nke etinyegoro mgbe nkwupụta nke mkpegharị ma ọ bụ ịgbachitere. Otu ihe a na-abawanye na nkwupụta ahụ. Agbanyeghị, site na mwepu, a ka nwere ike ịnabata ala n'oge ọzọ ma ọ bụrụ na onye nke ọzọ enyela ikike ya, mkpesa ahụ na-esite n'ụdị esemokwu ahụ ma ọ bụ ọnọdụ ọhụụ bilitere mgbe edere akwụkwọ ndị ahụ. Dị ka mmalite, usoro edere ederede na nke mbụ na-esochi ya mgbe niile site n'ụlọ ikpe. Enweghi ike na ụkpụrụ a na mkpesa: ịnụrụ ikpe n'ihu ụlọ ikpe bụ nhọrọ ma ya mere ọ bụghị ihe nkịtị. Ya mere, ụlọ ikpe na-edozikarị okwu ikpe ọtụtụ. Agbanyeghị, ndị abụọ a nwere ike ịrịọ ụlọ ikpe maka ịnụrụ ikpe ha. Ọ bụrụ na ndị otu chọrọ ịnụrụ ikpe tupu ụlọ ikpe mkpegharị, ụlọ ikpe ga-ahapụ ya, belụsọ ma enwere ọnọdụ pụrụ iche. Ruo n'ókè a, ikpe ikpe banyere ikike ịrịọ arịrịọ ka dị. Nzọụkwụ ikpeazụ nke usoro ikpe mkpegharị bụ ikpe. N’ikpe a, ụlọ ikpe mkpegharị ga-egosi ma mkpebi ikpe ụlọ ikpe a ekwesiri izi ezi. Na omume, ọ nwere ike were ọnwa isii ma ọ bụ karịa maka ndị ọzọ ga-eche ikpe ikpeazụ nke ụlọ ikpe mkpegharị. Ọ bụrụ na a kwadoro ala onye na-arịọ arịrịọ, ụlọ ikpe a ga-ewepụzi esemokwu ahụ ma dozie ya n’onwe ya.
Mkpegharị n'ụlọ ikpe nhazi you kwenyeghị na mkpebi nke ụlọ ikpe nchịkwa? Mgbe ahụ ị nwekwara ike ịrịọ arịrịọ. Agbanyeghị, mgbe ị na-emekọ ihe gbasara iwu nchịkwa, ọ dị mkpa iburu n'uche na n'ọnọdụ ahụ ị ga-ebu ụzọ lụọ okwu ndị ọzọ. A na-enwekarị oge izu isii site na mgbe ekwuputara mkpebi nke onye isi nchịkwa nchịkwa, n'ime nke ị nwere ike itinye akwụkwọ mkpesa. Ga-enwerịrị oge ndị ọzọ ị nwere ike ịtụgharị n'ihe gbasara ịrịọ arịrịọ. Kedu ụlọ ikpe ị ga-aga dabere n ụdi ikpe ahụ: • Ọchịchị na nchekwa ndị ọrụ obodo na ndị ọrụ obodo. A na-ahụ maka ikpe na nchekwa ọha na iwu na ndị ọrụ gọọmentị na arịrịọ site na Central Board nke Mkpegharị (CRvB) • Iwu nchịkwa akụ na ụba na ikpe na-enye ọzụzụ. Ihe ndị ọzọ, dị ka ndị ọzọ, Iwu Asọmpi, Iwu Mgbasa Ozi, Iwu Iwu Ahịa na Iwu Nkwukọrịta ka ndị Board of Appeal for Business (CBb) na-ahụ maka ya. • Iwu ọpụpụ na ihe ndị ọzọ. Ọnọdụ ndị ọzọ, gụnyere ikpe mbata na ọpụpụ, na-ahụ maka Ngalaba Nchịkwa Njikwa nke Council nke State (ABRvS) na mkpesa.
Mgbe arịrịọ ahụ Na-emekarị, ndị ọzọ na-agbaso ikpe nke ụlọ ikpe mkpegharị yana ikpe ha nwere na mkpegharị. Ka o sina dị, ị na-ekwenyeghị n'okwu ikpe ụlọ ikpe mkpegharị? Mgbe ahụ enwere nhọrọ ị ga-eziga akwụkwọ ikpe na Supremelọikpe Kasị Elu nke Dutch ruo ọnwa atọ mgbe ikpe nke ụlọ ikpe mkpegharị gasịrị. Nhọrọ a emetụtaghị mkpebi nke ABRvS, CRvB na CBb. E kwuwerị, nkwupụta nke ahụ ndị a nwere ikpe ikpeazụ. Ya mere, ọ gaghị ekwe omume ịgbagha mkpebi ndị a. Ọ bụrụ na enwere ohere nke cassation, ekwesịrị ịdeba na enweghị ohere maka nyocha nke esemokwu ahụ. Ihe mgbakwasị ụkwụ maka cassation dịkwa oke oke. A sị ka e kwuwe, enwere ike ịmalite ịgba akwụkwọ naanị ebe ụlọ ikpe pere mpe etinyeghị iwu ahụ. Ọ bụ usoro nwere ike iwe ọtụtụ afọ ma gụnyere ụgwọ dị elu. Ya mere odi nkpa iwepu ihe obula site na mkpeghari. Law & More dị obi ụtọ inyere gị aka na nke a. A sị ka e kwuwe, ịrịọ arịrịọ bụ usoro dị mgbagwoju anya na ikike ọ bụla, na-emetụtakarị ihe ndị dị mkpa. Law & More ndị ọka iwu bụ ndị ọkachamara na ma ndị omempụ, nhazi na iwu obodo ma nwee obi ụtọ inyere gị aka n'okwu ikpe. You nwere ajụjụ ọ bụla ọzọ? Biko kpọtụrụ Law & More.